Edito Taratra Archive | NewsMada | Page 54
Tsy hiamboho adidy…
Par Taratra sur 05/02/2016 Edito Taratra, NS Malagasy
« Tsy hiamboho adidy aho, mon général.» Tenin’ny kolonely Ratsimandrava Richard izany tamin’ny nanendren’ny filoham-panjakana sady lehiben’ny governemanta, Ramanantsoa Gabriel, azy hitondra ny tany sy ny fanjakana. 41 taona katroka anio 5 febroary io fifanolorana fahefana teo amin’ny roa tonta io. Tenim-pahendrena izany, ary feno fahatokisana sy fahavononana eo amin’ny andraikitra natolotra. Nampiavaka ity kolonely sady […]
« Miala ilany »…
Par Taratra sur 04/02/2016 Edito Taratra, NS Malagasy
Asa, inona ihany ny mbola andrasan’ny fitondrana tsy hanamboatra ny governemanta na hanolo ireo minisitra tsy mahavita azy amin’izao fotoana izao. Teo aloha teo, nandeha be ny resaka amin’ny hoe tsy maintsy hirosoana ny fanamboarana ny governemanta. Efa tafajoro rahateo koa io ny Antenimierandoholona. Io mantsy ny hoe nandrasana. Izao ka hoe mbola mpisolo toerana […]
Par Taratra sur 03/02/2016 Edito Taratra, NS Malagasy
Isan’ny volana manahirana ny janoary. Toa lasa lava noho ny hafa izy io noho ny fandaniana natao nandritra ny fetin’ny faran’ny taona. Matetika koa, ratsy ny andro ka mahatonga ny fiakaran’ny rano, manaraka koa ny vidin-javatra. Tamin’ny taon-dasa, ohatra, sarotra ny nahita saribao ary nirehitra mihitsy ny vidiny. Soa fa tsy niverina ny orambe tsy […]
Mihatra ny loza
Par Taratra sur 02/02/2016 Edito Taratra, NS Malagasy
Loza iray, loza roa, loza tsy mety voafehy fa mamely isan-taona. « Tora-bato avy any an-danitra io », hoy ireo tsy te hisaina lavitra. Ekena fa loza voajanahary tokoa ity mamely mafy ny mponina any avaratry ny Nosy ity. Tsy ny any avaratra ihany fa hatrany atsimo koa, saingy ny fisehony no tsy mitovy. Ny voalohany tondradrano, ny […]
Ny hamisavisana ny soa, hialan’ny ratsy…
Par Taratra sur 01/02/2016 Edito Taratra, NS Malagasy
Ny hamisavisana ny ratsy, hiavian’ny soa. Mahazatra izay, mampahazo vahana ny fanahiana aza. Raha ny toe-draharaham-pirenena sy ny fiainam-bahoaka ankehitriny, maso miara-mahita: be lavitra noho ny tsara ny ratsy, tsy hita hotanisaina? Ny fandio iray siny, hono, tsy mahaleo ny fandoto iray tandroka. Vao mainka izay fandio iray tandroka hahaleo ny fandoto iray siny, raha […]
Par Taratra sur 30/01/2016 Edito Taratra, NS Malagasy
Alahelon’ny vahoaka eto Antananarivo Renivohitra, am-bodivilany feno arina sady Renivohitr’i Madagasikara, ny fako sy loto. Ekena, na eo aza ny hoe fanadiovana sy fandaminana ny moron-dalana mbamin’ny fifamoivoizana. Mbola izay talaky maso ihany no ihetsehana. Hafa ny any anaty tanàna: loto tsy loto, fako tsy fako, fofon-dratsy tsy fofon-dratsy… Tsy vitan’izany, tsy rivotra iainana ihany […]
Miaiky aho izay !!!
Par Taratra sur 29/01/2016 Edito Taratra, NS Malagasy
Vaovao lehibe, tany Frantsa afakomaly, ny fametraham-pialan’ny minisitry ny Fitsarana, Christiane Taubira. Toy ny vara-datsaka, teo amin’ny ankamaroan’ny mpanara-baovao, izao fanapahan-keviny izao, noho ity ramatoa ity manana ny lazany sy ny toerany (anisan’ny andrarezin’ny hery ankavia, tao amin’ny antoko sosialista), tsy tao anatin’ny governemantan’ny praiminisitra Manuel Valls sy ny fitondran’i François Hollande ihany fa eo […]
Par Taratra sur 28/01/2016 Edito Taratra, NS Malagasy
Mety hoe fanaitairana ny fitondrana no nitondran’ny masoivoho amerikanina ny kabariny, saingy rehefa dinihina tsara, fibedesana indray izany. Bedy satria miraviravy tanana amin’ny resaka kolikoly. Bedy satria mitazam-potsiny ny mpanondrana andramena. Izay aloha no tena nisongadina, saingy tsy izay ihany no efa nibedesan’ireo firenena matanjaka ny mpitondra malagasy. Fa nahoana moa izy ireo no mibedy? […]
Tsy sahy milaza ny marina
Par Taratra sur 27/01/2016 Edito Taratra, NS Malagasy
Asa na mitady ho tapitra, na iniana taperina ny « série » kidnapping momba an’i Toamasina fa hita ho mifanilikilika, manafinafina tsy sahy milaza ny marina ireo tompon’andraikitra samihafa mandray an-tanana ity raharaha ity. Samy manana ny filazany rehetra rehefa mamory ny mpanao gazety, ary ferana ihany ny zavatra tokony holazaina. Nanao ny azy ny mpitsara, ny […]